Daryeelka gadhka: tilmaamaha ugu fiican - Talo ku saabsan Ragga Qaabka leh | Ragga Stylish
Daryeelka gadhkaaga: talooyinka ugu fiican
Alicia tomero | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed
Haysashada gadh adag, adag oo si fiican loo hagaajiyey waxay umuuqataa hawl fudud. Dhibaatooyin dheeraad ah la'aanteed, uma baahnid wax ka badan inaad timahaaga koraan oo taasna wax walba waa lagu xallin lahaa, laakiin taas waad ogtahay Ma xiran kartid xaalad wanaagsan haddii aad taqaano sida loo daryeelo gadhkaaga.
In gadhka loo daayo xawaarahaaga waxaay la micno tahay inuu noqon karo jajab iyo cake, waa inaad xakameysaa horumarkan oo aad daryeeshaa muuqaalkiisa wanaagsan. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa tallaabooyin taxane ah oo ay tahay in lagu dabaqo maalin kasta. Dhibaatooyin dheeraad ah la'aan, halkan waan awoodnaa Faahfaahin dhinacyada qaar taasi ma noqon doonto mid aad u culus.
1 Sida gadhka loogu beero si sax ah
2 Talooyin ku saabsan jarista gadhka
3 Sideen u daryeelaa?
4 Sideen u hagaajin karaa gadhka?
Sida gadhka loogu beero si sax ah
Haddii aad rabto inaad timo caafimaad qabta eegto, waa inaad cun cunno caafimaad leh oo miisaaman. Qiyaaso wanaagsan oo fiitamiinada A, B, C, E ah oo ay weheliyaan biotin ayaa had iyo jeer muhiim u ah timuhu waxay u koraan caafimaad iyo xoog.
Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad gadhka korto, waxaa hubaal ah inaad dareemi doontid go'aan la'aan sida loo bilaabayo sameynta, laga yaabee inay ku bilaabmi doonto mid adag iyo koritaan toosan. Hadaad bilawdid diir maqaarka wajiga halka gadarku ku baxo, Tani waxay kaa caawin doontaa inay soo baxdo iyada oo aan dhib lahayn. Ku cun biyaha saamiga aad u baahan tahay, maadaama waxay si fiican u waraabin doontaa maqaarkaaga iyo gaar ahaan timaha.
Waxa aad uga sii dari karto waa cuncunka ay soo saari karto, laakiin taasi waxay leedahay xal ama ugu yaraan waxay dejisaa dareenka xoogaa yar. Laga yaabaa in aad isticmaal saliidaha gaarka ah si aad u daryeesho gadhka, Badeecadani waxay gacan ka geysaneysaa jilicsanaanta garka waxayna yareysaa raaxo darradaas. Waa kuwan fikradaha qaarkood dheeraad ah oo cad in garka loo baxo.
Talooyin ku saabsan jarista gadhka
Waxaan haynaa tiro mashiinno aan dhammaad lahayn oo laga heli karo suuqa oo naga caawin doona inaan jarno ama si siman gadhka u dhibno. Baarayaashaas korontada ku shaqeeya waxaa loogu talagalay inay hoos u dhigto heerka gadhka, hagaaji oo qaabee adigoon xiirin, awood u lahaanshaha inuu ka tago ilaa 0,4 mm oo dherer ah.
Adeegso mashiinadan waxay kaa caawin doontaa in gadhka la jaro dhererka la rabo. Isku day inaad qalajiso gadhkaaga, markasta way ka fiicnaan doontaa inaad sameyso markay qoyan tahay, maxaa yeelay waxay ku siin doontaa natiijada ugu fiican.
Caawinta shanlada ayaad awoodid shanlee timaha oo jar dhammaan kuwa aadka u muuqda. Ka caawi naftaada maqas si aad u qeexdo meelaha qaarkood sida qaybta shaarubaha. Haddii aad jeceshahay inaad ku sameyso xaaladaha ugu fiican, maqaalkan Waxa kale oo aad ka heli kartaa tilmaamaha ugu fiican ee aad ku hagaajin karto garkaaga si hufan.
Sideen u daryeelaa?
Haddii aad horey u laheyd gadhka koray oo aad ku dhiiratid inaad daryeesho ugu badnaan, kuwani waxay noqon karaan tilmaamaha ugufiican ee lagu muujiyo timaha caafimaadka qaba
Dhaq gadhka: inbadan ayaa lagu dhiiri galiyay inay isticmaalaan saabuun la mid ah tan madaxa loo isticmaalo, wayna ogyihiin inay khalad weyn noqon karto. Saabuunta noocan ahi ma bixiso natiijooyin wanaagsan muuqaalkeeda oo xitaa waxay noqon kartaa mid xanaaq badan markii loo isticmaalo aaggaas wejiga ah. Waayo, Waxaa jira saabuunno gaar ah oo wax lagu nadiifiyo.
Waxaa jira ka qaad dhammaan walxaha wasakhda ka dhigi kara iyadoo si diiran loogu duugaayo si ay uga soo dusho geesaheeda oo dhan Gudaha daqiiqad luqluqashada waa inaad ku sameysaa si qumman, Maaddaama haraaga saabuun ee suuragalka ah uu dhibsado maqaarka. Ku sii wad inaad ku qallajiso gadhkaaga tuwaal jilicsan si aad uga saarto qoyaankiisa oo dhan.
Isticmaal qaboojiye: Nooca noocan ah ayaa loogu talagalay ka tag gadh jilicsan oo jilicsan, maxaa yeelay waxay hagaajineysaa cutka burburay. Waxaa la adeegsadaa markuu gadhka qalalo, iyadoo la isticmaalayo qayb yar iyo farahaaga ku salaax si aad ugu ekaato mid jilicsan oo dhalaalaya. Isticmaalka qaboojiyaha waxay lamid tahay adeegsiga dawada sixirka, waxay ka hortageysaa jahwareerka, xoqida xanaaqa ee gadhka iyo timo jabka timo la'aanta jirka awgeed.
Codso saliida gadhka: badeecadani way fiicantahay in lagu nafaqeeyo timaha ugu badnaan, wuxuu waraabiyaa garka iyo maqaarka labadaba. Tani ma aha oo kaliya shaqadeeda tan iyo sidii aan soo sheegnay waxay yareyn doontaa cuncunka adoo jilcinaya timaha. Waxay quudin doontaa timaha timaha si uu u koro caafimaad ahaan.
Bacda: Badeecadani waxaa loo codsan doonaa gadhka aadka u dheer. Haddii aad qorshe ku leedahay meel ka baxsan gurigaaga waad dalban kartaa balmarkan maadaama ay kor u qaadeyso muuqaalkaaga. Waxay u muuqan doontaa inay ka sii dhumuc weyn tahay oo waliba qoyaan timaha iyo maqaarka. Daaweynteedu waxay ka caawisaa hagaajin fiican si aad u qaabeysan karto gadhkaaga.
Sideen u hagaajin karaa gadhka?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu gaari karo hagaajinta garka. Waxaa jira waxyaabo saliid ama beeyo ah oo aan aad u cufaneyn sidaa darteed heysashadu waa khafiif ama dhexdhexaad.
Dhanka kale, haddii aan rabno hagaajin aad u weyn, waxaan isticmaali karnaa fiilooyin ama waxes. Isticmaalkeeda ayaa koontaroolaya in timuhu dabci karaan oo ay jiraan alaabooyin bixiya muuqaal jajab ah si ay ugu muuqato inaadan codsan wax alaab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Daryeelka gadhkaaga: talooyinka ugu fiican
Sida loo helo lammaane